All Properties for Sale by SWEET LIFE CAMP REAL ESTATE SERVICES CO.ltd (REGISTRATION NO 120341464) | iMyanmarHouse.com
ရောင်းရန် (SWEET LIFE CAMP REAL ESTATE SERVICES CO.ltd (REGISTRATION NO 120341464))
မွနျမာဂုဏျရောငျအိမျယာ -(75*78)ပတျလညျ(2)RC -(11000)သိနျး ညှိနှိုငျးပါ့မယျ
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8010895 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
စမ်းချောင်းလမ်းမကြီးပေါ် စမ်းချောင်းမြို့နယ် B3 2275sq အကျယ် 5F Master room=1 Single room=2 BCC ,မီတာကျပြီး သွားလာရအဆင်ပြေပြီး, နေရာကောင်း ပတ်ဝန်းကျင်သန့် နေရာကောင်းလေးပါ , Sale=1100သိန်း ည...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8007741 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
တာမှမွေို့နယျ။ မတ်ေတာညှနျ့ရပျကှကျ။C3 အသောကဈေးအနီး။ 2RC ။ ဂရံအမညျပေါကျ။ မွကှေကျ အကယျြ။ ၃၀ပေ၅ဝပေ။ ကိုယျပိုငျ ခွံဝနျးလေးနဲ့ နခေငျြသူတှေ အတှကျ အရမျးအဆငျပွပေါတယျ။ Master Room ။...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8014801 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
တာမှေ ကြိုက်ကဆံလမျးမအနီး ARYU ဆေးရုံအနီး Pent House ရောငျးမညျ 35'x48' ကြှနျးပါကေးခငျး Master.2Single. 1 ပွငျဆငျပွီး သိနျး 1400 ညှိနှိုငျး A2....
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8007674 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
မေတ္တာလမ်းမကြီးအနီး တိုက်သစ်လေးရောင်းမည် အနော်မာလမျးသှယ်ရှိ အခန်းအကျယ်ဝန်း 18 x 54 ပရှေိ 3F 360 သိန်း စြေးအလြှော့တငျးရှိပါသညျ သွားလာရတာလွယ်ကူပါသည် ( A1 )...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8016455 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ဝေဇယန်တာလမျးမကွီးအနီး ဈေးတန်တိုက်ခန်းလေးရောင်းမည် သီဟသူလမျးသှယျရှိ အခန်းအကျယ်ဝန်း 13 x 54 ပရှေိ 5F 285 သိန်း ပါကေးအပြည့်ခင်းထားပါသည် စြေးအလြှော့တငျးရှိပါသညျ ( A1 )...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8016435 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြောကျမွောငျး တိုကျခနျးရောငျးမညျ ဒုတိယထပျ 25'x55' Hall Type သိနျး 750 ညှိနှိုငျး A2
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8016426 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
တောငျဥက်ကလာ ဗွဟ်မစိုရျလမျးမအနီး အတှငျးလမျးကယျြ မွညေီရောငျးမညျ ထပိခိုးတဈဝကျပါ 18'x54' အပျေါထပျပါကေး အောကျကွခေငျး နောကျဖေးမွပေို 10'x20'ပါ သိနျး 1000 ညှိနှိုငျး A3...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8016403 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
သင်ျဃနျးကြှနျးသုဝဏ်ဏ စြေးတနျတိုကျခနျးရောငျးမညျ အောငျဇယေလြမျးသှယျ ဒုတိယထပျ 18'x54' သိနျး 400 A2
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8016393 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
သင်ျဃနျးကြှနျး ငမိုးရိပျလမိးသှယျ တိုကျခနျးရောငျးမညျ ပထမထပျ 12'x50' သိနျး 290 ညှိနှိုငျး A2
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8016373 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
စမျးခြောငျး လမျးသနျ့ ကှနျဒိုရောငျးမညျ 5F. 1300 sqft Hall Type တိုကျသဈ သိနျး 700 ညှိနှိုငျး A2 3.1
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8016357 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
စမျးခြောငျး ဇယေသြုခလမျး 5F ရောငျးမညျ တဈမိုးအောကျ 12'x50' ကြှနျးပါကေးခငျး ပွငျဆငျပွီး သိနျး 400 A2 9.1
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8016339 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
တောငျဥက်ကလာ ရတနာလမျးမကွီးကြောကပျ မိကသီလမျးသှယျ စြေးတနျတိုကျခနျးရောငျးမညျ ပထမထပျ C2
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8016323 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ရပျကှကျသနျ့ နရောကောငျးတိုကျခနျးအရောငျး သံသုမာလမျးမကွီးအနီး ဒဲ့ပေါကျ C2
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8016311 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်